Vagadziri vemitambo yeLinux. Klei Varaidzo | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri vemitambo yeLinux. Klei Varaidzo mazita
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Linux Mitambo, Linux software
Huwandu hwemitambo yeLinux hwakakura zvakanyanya. Kutamba PaLinux akabvunza vaverengi vake kuti ichasarudza makuru mashanu emakambani ekugadzira ane mazita aripo eLinux. Iye zvino tava kuzoongorora chechina pane zvakanyorwa.
Tisati tatanga, ndinoda kudzokorora chikumbiro changu kuti iwe utaure pane zvako zvakaitika uchitamba neLinux. Kunyanya, pavanotitsamwira isu tinounganidza anosvika makumi matatu makomendi pachinyorwa chimwe nechimwe. Ndiri kubvunza, kunyangwe kana iri imwe chete ichiudza zviitiko zvake zvekutamba.
1 Vagadziri vemitambo yeLinux: Klei Varaidzo
1.2 Usaisa Nyeredzi pamwechete
1.3 Zvisingaoneki, Inc
1.4 Maka weNinja: Kuiswazve
1.6 Shanks 2
Vagadziri vemitambo yeLinux: Klei Varaidzo
Klei varaidzo inozvimiririra yemitambo yekugadzira studio iri muCanada. Iyo ndiyo nyowani yeaya atakakurukura kusvika parizvino, kubvira payakatangwa muna 2005.
Mamwe mazita anowanikwa kuLinux ndeaya:
Icho chiri pamusoro mutambo de kupona mune zvakasikwa uko sainzi uye mashiripiti anopindira.
Redu basa ndere raWilson, akashinga musayendisiti knight akabatwa nedhimoni ndokuendeswa kune imwe nyika isinganzwisisike yemusango. Basa redu ndere kudzidza kushandisa zvakatipoteredza uye vagari varo nekuti ndiyo chete nzira yekutiza nekuwana nzira yedu yekudzokera kumba.
Iyo yekushambadzira inoitika mune isingazivikanwe uye isingazivikanwe nyika izere nezvisingaite zvisikwa, njodzi uye kushamisika.
Usaisa Nyeredzi pamwechete
Iko kuzvimiririra-kwakazvimirira kuenderera kwenyaya yapfuura, asi multiplayer. Uyezve, wedzera mavara matsva, mwaka, zvisikwa, biomes, uye matambudziko.
Tichadzokera mukati munyika isinganzwisisike uye isina kuongororwa isina kuzara nezvisikwa zvisingazivikanwe, njodzi uye kushamisika. Tichafanira kuunganidza zviwanikwa kuti tigadzire zvinhu uye zvivakwa zvinoenderana nemabatiro edu ekupona isu tichifumura zvakavanzika zvenyika ino isingazivikanwe.
Tinogona kuzviita tega, kubatana pamwe neshamwari dzedu, kana nevasingazive vanopinda mutambo wepamhepo.
TTora kutonga kwevasingaonekwe vamiririri mumunda uye nekupinda mumakambani ane njodzi pasi rese. Kuba, kunyatsoita basa, pamwe nekubatana kwakakosha munjodzi dzakanyanya, mibairo yepamusoro, uko kufamba kwese kunogona kudhura mumiririri hupenyu hwavo.
Zvimwe zvinotonhorera maficha yemutambo Ndizvo:
Multiple inotanga: Unogona kutanga nechero gumi evasina kuvhurika vamiririri mumutambo, sarudza imwe yematanhatu ayo, uye sarudza pakati pematanhatu ekutanga zvirongwa kuti utyore kuchengetedzeka kwekambani iwe yauri kupinza.
Kuchinja Kukura: Wese mutambo wakasiyana sezvo iwe uchigadzira yako yega zano uchishandisa vamiririri, zvinhu, zvinowedzerwa, uye zvirongwa, uye kuchinjika kune yako nharaunda.
Nenguva Dzose Dzinogadzirwa Nyika: Nzvimbo, kutyisidzira, uye kupamba zvakapambwa zvakagadzirwa, saka mutambo wega wega wakasiyana kwazvo uye hauzombogutsikana.
Maka weNinja: Kuiswazve
Wakagara uchirota nezvekuva ninja? Ichi chi mutambo wako.
CKufanana neninjas chaidzo, unofanirwa kunge wakanyarara, wakashinga uye wakangwara kuti upfuure vadzivisi vako munyika inoyevedza nharaunda uye hwemvura maficha. Neraki iwe unoratidzwa nematanho akatukwa ayo anokupa iwe kumusoro kwepfungwa uye anotendera iwe kuti uongorore zvaunogona kuita
Maitiro maviri emitambo: Usauraya chero munhu kana kuyedza kuuraya munhu wese zvinogoneka.
Ruoko rwakapendwa mifananidzo.
Remastered Audio - Zvino inotsigira 5.1 kutenderera kurira.
Zvimwe zvinowaniswa zvisingavhurike zvemukati nematambudziko matsva nemubairo.
Pano isu tine rumutsiriro rwemakomputa epamba kubva pamakumi masere. Side scrolling mitambo. Ehe nemifananidzo iri nani.
SaShank uchafanirwa kupfura uye kurwisa nzira yako kuburikidza nemhomho yevavengi mune yakaoma choreography yekuuraya. Usasvinure uye ubvise kushushikana nekutanga nzira ineutsinye yekutsiva yakanyoroveswa muropa ichibatsira Shank kurwisa nzira yake kuburikidza nematsotsi ane njodzi mukutsvaga kwake kururamisira.
Kana iwe usina kuuraya vanhu vakakwana, pano iwe une kuenderera kubva munyaya yaShank
Shamwari yedu Shank inomanikidzwa zvakare pane zvinogumbura Ino nguva yekudzivirira vaanoda. Neraki, hausi wega. Ane arsenal yako yakavimbika yepfuti, pfuti, zvombo otomatiki, macheni, machete uye magirinedhi. Asi, sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, zvakare ine zvombo zvitsva zvachose uye nekuwedzera hunhu mafambiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vagadziri vemitambo yeLinux. Klei Varaidzo mazita
Ini handikwanisi kusiya windows nekuda kwekuti mitambo inoitirwa iyo OS.Tinovimba makambani ese anotanga kugadzira mitambo inoenderana-linux, rinozove iro zuva iro Microsoft inogona kukanganikwa. Kwazisai nekutenda kwechinyorwa, ipa tariro shoma
Chinhu chega chandiri kutamba parizvino paPC Chikwata cheLegends, zvinova zvinoita kuti ndive neLinux pane yangu PC huru (kana pane vamwe). Zvisinei, pandinotanga kuenda kuyunivhesiti ndinopedzisira ndaisa kubuntu.
Anogadzira uye muparidzi wandinoda chaizvo ndiChucklefish, zvinosuwisa kuti mitambo yavo mizhinji haisi yeLinux.
Ini ndichangotanga kuverenga peji ino, asi ini ndinopinda mazuva ese.
Diego ChiGerman Gonzalez akadaro
Pindura Diego Germán González
Hondo yekutinhira yave kuwanikwa paLinux Gaijin Mitambo
Teardown: iyo chaiyo yekuparadza yevhidhiyo mutambo iwe waunoda paLinux
Waini 5.3 inouya nerutsigiro ruzere rwe Unicode yakajairwa uye zvimwe zvinowedzera